QCA6174 QCNFA34AC QCNFA344A QCNFA364A Atheros WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN ကဒ်ကို Windows ယာဉ်မောင်း Download | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
QCA6174 QCNFA34AC QCNFA344A QCNFA364A Atheros WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN ကဒ်ကို Windows ယာဉ်မောင်း Download
စက်တင်ဘာလ 14, 2017 admin ရဲ့ မောင်းသူ, ကြိုးမဲ့စက် 0
OS ကို-STORE အားဖြင့်ယာဉ်မောင်း atheros
အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. မောင်းသူသာများနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူ Atheros များအတွက် download, ရွေးချယ်မှုများပါဝင်သည် / Qualcomm မှ software များ.
device ကိုမော်ဒယ်: Atheros / Qualcomm မှစီးရီး
အဘယ်အရာကိုယာဉ်မောင်း Atheros မော်ဒယ်ထောကျပံ့နိုငျ? ဒီစာမျက်နှာဖတ်ရှုပါ.
Atheros Bluetooth ကိုယာဉ်မောင်းကဒီမှာ click နှိပ်ပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်.
Atheros / Qualcomm မှကြိုးမဲ့ Wi-Fi Software များအဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြုသည်, အဆင့်မြင့်အိုင်တီအုပ်ချုပ်ရေးမှူး tools တွေကိုမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့သူအိမ်တွင်အသုံးပြုသူများနှင့်စီးပွားရေးဖောက်သည်များအပါအဝင်.
Windows XP ကို​​ 32-bit နဲ့ / 64-bit နဲ့ (နောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမထောက်ခံအားပေး)
Windows ကို 10 32-bit နဲ့ / 64-bit နဲ့
AR9380 AR9382 AR9390 AR9392 AR9485 AR9462 AR9580 AR9590 Atheros WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN ကဒ်ကို Windows ယာဉ်မောင်း Download
Windows ကိုဒေါင်းလုပ်များအတွက် Atheros AR9462 AR5B22 WB222 WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN Card ကိုယာဉ်မောင်း
Windows ကိုဒေါင်းလုပ်များအတွက် Atheros AR9565 QCWB335 WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN Card ကိုယာဉ်မောင်း
XB116 AR5B125 AR5BXB112 AR5BHB116 AR5BXB114 AR5BHB118 AR5B125 Atheros WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN ကဒ်ကို Windows ယာဉ်မောင်း Download
AR5B91 AR5B93 AR5B95 AR5B97 AR5B195 AR5B197 AR9227 AR9271 Atheros WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN ကဒ်ကို Windows ယာဉ်မောင်း Download
winodws ဒေါင်းလုပ်များအတွက် AR5008WB AR5008X AR5416 AR5418 AR2133 AR5133 Atheros WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN Card ကိုယာဉ်မောင်း
Qualcomm မှကြိုးမဲ့ Wi-Fi Software များ
Blu-ray bd နိဒါန်းအကြောင်း
Nokia က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု ဥပဒေရေးရာအနက် နည်းပညာ processor ​​ကို စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ HTC က မိုဘိုင်းဖုန်း device ကိုမော်ဒယ် စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု 64-နည်းနည်းက Windows Software များ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Technology_Internet ပရိုဆက်ဆာ စီပီယူ OS ကို-STORE HD Graphics Intel က Samsung က
စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Nokia က HD Graphics Intel က Samsung က 64-နည်းနည်းက Windows processor ​​ကို Software များ HTC က device ကိုမော်ဒယ် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု စမတ်ဖုန်းများ စီပီယူ Technology_Internet စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Sony Ericsson က Samsung ရဲ့ Galaxy မိုဘိုင်းဖုန်း ဥပဒေရေးရာအနက် Qualcomm မှ OS ကို-STORE Intel က Server ကို ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် နည်းပညာ ပရိုဆက်ဆာ